Madaxweynayasha Afrika oo isugu tagaya Magaalada Nouakchott | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweynayasha Afrika oo isugu tagaya Magaalada Nouakchott
Madaxweynayasha Afrika oo isugu tagaya Magaalada Nouakchott
Magaalada Nouakchott ee dalka Mauritania ayaa lagu waddaa in uu maalmaha soo socda uu ka furmo shirka caadiga ah ee Madaxda dowladaha ee Midowga Afrika.
Shirkan caadiga ah ee Madaxda dowladaha ee Midowga Afrika ayaa mid ka mid ah shirarka Ururka Midowga Afrika, waana shirka labaad ee ururka uu yeesho sanad walba, marka laga soo tago shirka guud ee Madaxweynayaasha ee sanadlaha ah.
Madax kala duwan ayaa shirkaan ka qeyb galaysa sida Madaxweynayaal, Wasiiro iyo Marti Sharaf lagu cusuumay.
Shir caadiga 31aad ee Midowga Afrika ayaa waxaa looga hadlayaa qodobo kala duwan, sida dib u habeynta ururka, qarashka uu ku shaqeynayo, Nabadeynta Koonfurta Suudaan iyo arrimo kale oo quseeya dalalka Afrika.
Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa lagu waddaa in ay u ambabaxaan magaalada Nouakchott si ay shirkaan ugu qeyb galaan,iyadoona hadda uu halkaasi ku sugan yahay Wasiir dowladaha Arrimaha dibadda Soomaaliya.